Matemplate Eruzhinji Meseji Meseji Iwe Unogona Kuida kune Rako Bhizinesi | Martech Zone
Zvakafanana nebhatani remazuva ano nyore. Kunze kwekunge ichiita zvese izvo hofisi gadget yezuro rapfuura yaisakwanisa.
Kutumira mameseji kungangoita seyakareruka, yakatwasuka uye inoshanda nzira yekuita chero chinhu mubhizinesi nhasi. Vanyori vanobva kuForbes vanosheedzera mameseji kushambadzira muganho unotevera. Uye ndiyo yausingade kupotsa nekuti kukosha kwe mobile mune yanhasi yedhijitari yekushambadzira nzvimbo yakakosha.
Studies inoratidza iyo 63% yevanoshandisa Smartphone vanochengeta magajeti avo batsira 93% yenguva yavanomuka. Uye 90% yenguva, munhu anoverenga chinyorwa mukati memaminetsi matatu mushure mekuchigamuchira
Chinyorwa Meseji Kushambadzira Mienzaniso
Kusarudza kuwedzera chokwadi ichi nemushandirapamwe wemeseji meseji ibhizimusi rakangwara.
Mikana yekuti iwe waona mizhinji yemienzaniso yemakambani chaiwo vachishandisa kushambadzira kweSMS mune imwe chete rwendo kuenda kunzvimbo yekutengesa pasina kuiona. Sezvo ichishandira huwandu hwakawanda hwemabhizinesi, iri pazvinhu zvese kubva kune vatengesi vezvipfeko uye zvitoro zvemakenduru kune zvitoro zvekofi uye nhare dzenhare.
Polo Ralph Lauren anoisa kushambadzira mameseji kuzviito neayo kutanga kuziva nzira. Vatengi vanonyorera Polo Pakuenda zvipo zvakakosha zvinogona zvakare kusarudza kuti uzive nezvekutengesa uye vatsva vanosvika.
Mikana ndeyekuti iyo mall pachayo inoshandisa kutumira mameseji kutaurirana zvakafanana zvipo zvakakosha uye rega vatengi vazive nezve zviitiko nekutengesa. Mayfair Mall muMilwaukee, Wis. inogamuchira vaenzi kunzvimbo yayo yekutengesa uye webhusaiti nekurudziro ku Join the Club kudzidza nezve chero chinhu kubva kunhengo-chete zvidzikisira kune itsva chitoro kuvhura uye zvazvino maitiro.
Matemplate eIri yega uye yega Bhizinesi Anoda
Zvichakadaro, a tsvakurudzo inoitiswa neThe Alternative Board yakaona kuti 19 muzana yevaridzi vemabhizinesi madiki vanoshanda anopfuura maawa makumi matanhatu pasvondo, uye mumwe chete pavashanu varidzi vemabhizinesi madiki vanoshanda zvakaderera pane zvakajairwa maawa makumi mana evhiki rebasa
Mune bhizinesi, nguva yakakosha. Hapana mubvunzo pamusoro pazvo. Saka ko kana pese pawakafunga kutanga mushandirapamwe mutsva wekusimudzira, kutumira chiitiko chekuyeuchidza kana kuzivisa vashandi vako nezve musangano, paive netemplate yeiyo?
Izvo zvinokwanisika kuve neese anodikanwa matemplate, akachengetedzwa zvakaringana munzvimbo imwechete pane ako matinji. Pfungwa ndeyekuti haufanire kunyora meseji yacho pachako, asi unogona kushandisa nguva iyoyo pane zvaunoita zvakanyanya: kuvaka bhizinesi rako.
Chikwata chiri paTextMagic, kambani hombe yeSMS, vakakuitira basa rese, vachipa yega yega meseji template iwe yaungangoda kune rako bhizinesi nezvose zvakakosha pano.
Semuenzaniso, meseji inoshanda inofanirwa kusanganisira yekufona-ku-kuita, zita remutumisi uye nhamba yefoni uye chinongedzo chipfupi kune webhusaiti yemutumi (kana zvichidikanwa).
Matipi Emamwe Mhando dzeSMS Makambani
Kunze kwemisimboti iyoyo, hezvino izvo zvese muridzi webhizinesi zvaanoda kuziva nezve akati wandei emhando dzeSMS mishandirapamwe:
Kushambadzira uye Inosimudzira SMS - Meseji dzinoshandiswa kushambadzira nekusimudzira dzinofanirwa kubata zvakakwana kuti vese vafonere mupi wekuita panguva imwe chete vachigadzira pfungwa yekukurumidzira. Izvi zvishandiso zvinobudirira zvekutaurirana zvinhu zvakaita sekutenga, tenga kutengesa pamwe chete nekuchengetedza vatengi kuziviswa nezvikafu zvemasikati uye makuponi, zviitiko zvakakosha kana shanduko kuvhura kana kuvhara nguva dzebhizimusi rako.
Zviyeuchidzo zvekugadzwa - Chiyeuchidzo chakakodzera chekugadzwa chinofanira kusanganisira zuva uye nguva yekugadzwa, nzvimbo, zita rako (kana zita rekambani) uye nhamba yako yefoni. Izvi zvinonyanya kubatsira kune vhudzi rebvudzi, vanachiremba vemazino, vanachiremba, mabhangi, uye chero rimwe bhizinesi-rakagadzwa
SMS Notifications uye Alerts - Yakanaka-yekutsanangudza, Notices uye chenjedzo zvinofanirwa kusanganisira ruzivo senge kero yekuendesa, inofungidzirwa nguva yekusvika, zita rekambani, uye nhamba yefoni. Aya mameseji anonyanya kubatsira kumabhangi, uye nekuzivisa vatengi vane akakosha nhoroondo mamiriro eakaundi uye musangano wekushandura zviziviso.
SMS Kusimbiswa - Yakakura kune avo vanofamba kazhinji, kusimbiswa kweSMS kunofanirwa kusanganisira chinhu kana ID yekubhuka, zita rekambani, pfupi pfupi kune webhusaiti yekambani, uye wekutenda meseji. Izvi zvinoshandiswa kazhinji zviyeuchidzo zvekubhururuka, shanduko kunguva dzendege, kubhuka kwehotera, uye kusimbiswa kwekubhadhara.
Kana zvasvika pakuita chimwe chinhu chiri nyore kubhizinesi rako, chinhu chiri nyore chaungaite tinya tuma.
Kutumira mameseji kungangoita seyakareruka, yakatwasuka uye inoshanda nzira yekuita chero chinhu mubhizinesi nhasi.
Uye nyanzvi pa TextMagic unoda kubatsira kuzviita chishandiso chaunoshandisa kune rako bhizinesi, kuti ugone kutarisa pane zvaunoita zvakanyanya. Iyo kambani inopa yemahara muedzo kana iwe ungangoda kutanga kushandisa mashoma mameseji.
Tags: YeMahara neThebhu Kushambadziramobile marketingpolopolo uchiendapolo ralph laureninosimudzira smspromotional mamesejismartphoneSMSsms chenjedzosms noticeschinyorwa kirabhumameseji meseji yambiromameseji ezazisomameseji mameseji matemplatemamesejizviyeuchidzo zvekutumira mamesejizviyeuchidzo zvemavaratextmagic
Anastasia Sviridenko maneja wekushambadzira zvemukati pa TextMagic, yose-mu-imwe hombe yeSMS mhinduro yebhizinesi. TextMagic ibasa rinopa mukana kune ese madiki uye makuru mabhizinesi ekuitisa mamishinari eSMS ekushambadzira, kutumira ziviso, kunyevera, uye kusimbisa.
Aug 16, 2017 pa 5: 23 AM
Kutenda nekugovana ruzivo rwakadai. Ichokwadi kuti meseji meseji ine yakasarudzika fomati yekutengesa kweSMS senge yekusimbisa meseji ine matemplate akasiyana ane hukama nevamwe mameseji masevhisi.